Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Gooseneck Kitchen Faucet Chrome
Rehefa mihodina ny mpantsaka an-dakozia dia mihodina ilay voatabia, afetaho ny baravarana handrindrana ny loharanon-drano voalohany.
Ny sivana foam dia manamboatra ny rano ho malefaka kokoa sy mahomby kokoa ary mandaitra kokoa.
2311701C torolàlana fametrahana
Ity fangaro ity amin'ny fametahana an-dakozia 2311701C dia manintona ny sprayer dia vita amin'ny varahina tsara ary manasa lamba. Ny SUS304 dia marefo sy salama. Miankina amin'ny mpiambina ny fahasalamantsika. Izy io dia azo atao amin'ny alàlan'ny fihodinana mafana sy mangatsiaka, mora soloina, mora apetraka, tsotra ary kanto, ary mety ho an'ny mando lakozia sy ny lakozia.
Pull toy ny tianao, super mora ny manosihosy sy manasa lovia, rano famokarana multifunctional, rano fandroana / faucet dia azo ovaina ny sitrapo, vy vita amin'ny valve core, matevina miorina mafy ary maharitra
Ny fonosana vokatra dia misy: grososy, hosoka, tantanana lanja, fametrahana fametrahana fitaovana
SKU: 2311701C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: 1 Tolefo, Chrome, sprayer
60 x 30 x 7.5 cm; 2.94 Kilogramatra